Uyikhuphela njani iMovie kwiYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyikhuphela njani imovie kwiYouTube?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 365
I-YouTube ingaphezulu kweqonga lokubukela iividiyo zomculo. Ngeli phepha, abasebenzisi banokufikelela kwimixholo eyahlukeneyo, kubandakanya iinkqubo zikamabonwakude, uthotho kunye neemovie. Namhlanje siza kukufundisa indlela yokukhuphela iimovie zikaYouTube ngokulula nangokukhululekileyo.
Ukukhuphela iifilimu kweliqonga kulula. Ngokusisiseko, abasebenzisi baneendlela ezimbini zokwenza njalo, nokuba kungenye yala maphepha okhuphelo okanye ngayo nayiphi na inkqubo okanye usetyenziso olufakwe kwisixhobo.
Iindlela zokukhuphela iimovie zeYouTube
Namhlanje zikho iindlela ezininzi zokukhuphela iimuvi ezigcinwe kwiYouTube. Ngokwenyani inkqubo iyafana naleyo siyenzayo xa sifuna ukukhuphela umculo okanye iividiyo kweliqonga, umahluko ngoku esiza kuzama ukukhuphela imovie.
Kwi-intanethi sinokufumana uluhlu olude lokukhetha ukukhuphela iifayile kwi-Youtube. Uninzi lwabantu lukhetha ukusebenzisa amaphepha, nangona kukho enye indlela yokufaka iinkqubo kunye nokusetyenziswa.
Khuphela kumakhasi ewebhu
Olunye ukhetho lukawonkewonke lokukhuphela iimovie I-YouTube ingala maphepha akhethekileyo xa kukhutshelwa. Ngethamsanqa, zininzi ezikhoyo, kwaye uninzi lubonwa ngokuba simahla kwaye zifikeleleka ngokulula.
Enye yeendlela ezizezinye onokuzisebenzisa yile Youtubedownload.com ejongeka njengelinye lawona maphepha agqibeleleyo ngalo mzuzu. Apha unokukhuphela iimovie kwifomathi ye-MP4 kwaye ngomgangatho olungileyo:
Kulo ibhokisi yokukhangela bhala igama lemovie ofuna ukuyikhuphela
Khetha ifayile kwaye ukope ikhonkco
Ukufikelela kwi com kwaye uncamathisele ikhonkco
Cofa ku- “khuphela"
Ifayile yokukhuphela ifayile iya kuvela. Kufuneka ucofe ku "Gcina”Emva koko ukhethe ifolda apho ufuna ukugcina ifayile.
Abo bantu bafuna ukukhuphela iimovie zeYouTube ngokusebenzisa usetyenziso Banokukwenza ngaphandle kwengxaki. Inye kuphela iya kuba kukukhetha usetyenziso lwakho olukhethileyo, ulufake kwisixhobo kwaye ulandele amanyathelo ngamanyathelo aboniswe liqonga.
Esinye sezona zicelo zibalaseleyo zokukhuphela iimovie kunye nomxholo ogcinwe kwiYouTube I-Snaptube, ithathwa ngabaninzi njengenye yezona zihlaziyiweyo nekulula ukuzisebenzisa.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile khuphela usetyenziso lweSnaptube kwisixhobo sethu esiphathwayo. Ngalesi sicelo unokuzikhuphelela iimovie ze-HD kunye neevidiyo kwi-intanethi simahla.
Vula Isicelo seSnaptube kwiselfowuni yakho
Kufuneka ukhethe ukhetho "Iindawo zeVidiyo"
Khetha iwebhusayithi yevidiyo ukusuka apho ufuna ukukhuphela ifayile, kule meko i-Youtube.
Bhala igama Kwimovie ofuna ukuyikhuphela. Iziphumo ezininzi ziya kuvela kwaye kufuneka ukhethe ukhetho oluchanekileyo.
Cinezela kwi icon yomhla ebonakala kwicala lasekunene ukuqala ukhuphelo.
Landela la manyathelo aboniswe sisicelo. Khetha i ifomathi yokukhuphela kwaye ulinde ukuba inkqubo igqitywe. Ifilimu iya kuba sele ikhutshelwe kwiselfowuni yakho.
1 Iindlela zokukhuphela iimovie zeYouTube
2 Khuphela kumakhasi ewebhu
3 Khuphela kwi-App
Ndingabandisa njani abalandeli bam kwiPinterest?
Ndifuna ukubeka amakhonkco kwi-Instagram yam, kodwa ndinabalandeli abangaphantsi kwe-10.000.